Milixda "Mushroom" Kala Gooshaha Dhimashada Badda - Ellicott Dredges
Badda Dhimatay waxay ku taal dhinaca koonfureed ee Dooxada Urdun. Badda Dhimatay iyo xeebaha ku xeeran ayaa ah meesha ugu hooseysa dhulka - 400 mitir ka hooseeya heerka badda. Magaca "Dhimasho" waxaa loo bixiyey jidhkan biyaha sababo la xiriira isku-urursanaanta macdanta iyo heerka oksijiinta oo hooseeya Isku darkaani wuxuu ka hortagaa nooc kasta oo nolosha noolaha ah ee ka jira gobolkan.
Israa’iil waxay ku shaqeysaa iyada Hawlaha Badda Dhimatay (DSW), qayb ka mid ah boqolleyda 90 ee Israel Chemical Ltd. (ICL).
Howlgalka Jordan waxaa fuliyay Shirkadda Arab Potash Company (APC), kaas oo ay leedahay daladda dawladaha Bariga Dhexe, gaar ahaan Urdun. Waxsoosaarka sanadlaha ah ee DSW ee botaashku waa qiyaastii 2.2 mm tan.
Hawsha wax soo saarka ee macdanta (badanaa potash, oo loo isticmaalo bacrimiinta beeraha), waxay ku saleysan tahay roobka macdanta ee ku yaal sagxadaha balliga-daadinta ee dadku sameeyay, qodista macdanta ballaaran, qulqulatooyinka auger-ka-soo-saarka iyo ganaaxa lagu habeeyo. wax. Qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka ayaa ah yareynta roobka roobka ee miiska miiska (NaCl) ee ugu dambeeya balliyada uumiga. Sidaa daraadeed, wejiga koowaad ee howsha ayaa biyaha ka soo qodaya biyaha badda gudaheeda oo ah barkad 80 sq km. Barkaddan, balliga, oo ay ka kooban yihiin wax yar oo NaCl ah ayaa lagu tuuraa barkadaha wax soo saarka ugu dambeeya.
Bartamihii-80-meeyadii dhacdo dabiici ah ayaa lagu arkay balliga macmalka ah. NaCl wuxuu bilaabay inuu ku cadeeyo qaabka "boqoshaada" qeybaha kala duwan ee balliga. Tiirarka cusbada ayaa bilaabay inay ka soo baxaan gunta hoose. Markii ay gaareen dusha sare, waxay bilaabeen inay ku koraan xawaare dardar leh dhinacyada, kaasoo abuuray foom u eg boqoshaada. Boqoshaadaasi waxay xaddiday aagga oogada iyo awoodda uumi-bixidda balliga. Dadka DSW waxay bilaabeen inay raadiyaan xal u helida dhibaatadan laba heer ah: heer cilmiyaysan sababta ay u dhacday, iyo farsamo ahaan sida looga saaro likaha.
Muddadaas koox ka mid ah shaqaalaha Oceana Marine Ltd. waxay ku sugnaayeen warshaddii DSW dhiseen isla markaana u rakibaya nidaam kontoroolayaal casri ah iyo maraakiibta kuwa goosashada u leh DSW. U fiirsashada dhibaatada likaha, Maamulka Oceana wuxuu go'aansaday inuu baaro suurtagalnimada wax ku ool ah, aalado farsamo oo awood u yeelan kara inay ka saaraan qaab dhismeedka milixda adag.
Kadib markii la sameeyay sahan horudhac ah, Oceana waxay casuuntay soo-saareyaasha dredge si ay u baaraan dhibaatada una soo bandhigaan xalka suurtagalka ah. Ellicott® International of Baltimore, Maryland ayaa baaray goobta waxaana laga codsaday inay bixiso "dammaanad qaadasho waxqabad."
Maamulka Oceana wuxuu go'aansaday in Ellicott® qalabka sumadda ayaa ugu habboon mashruuca. Sababaha tani waa:
Khibrad u yeelashada maaddada maaddada adag.
Ellicott® International of Baltimore, Maryland waxay ogolaatay inay bixiso "dammaanad qaadasho waxqabad" si loo hubiyo in qalabkoodu awood u leeyahay inuu si hufan u qodo qaababka likaha adag.
Shirkaddu waxay leedahay awood ay ku dhisto oo ay ku wareejiso kayd ku habboon muddo lix bilood gudahood ah.
Oceana loo xushay (oo ay la socoto oggolaanshaha DSW) Ellicott® astaanta B890 baaldiga bulukeetiga, oo lagu beddelay radiators gaar ah iyo qalab kale oo loogu talagalay mashruuca. Qulqulka wuxuu leeyahay '100 HP dual wheel', karbaarada gawaarida, iyo matoorada CAT.
Qandaraaska mashruuca tijaabada waxaa lagu kala saxiixday inta u dhaxaysa DSW iyo Elliana (oo ah shirkad iskaashatooyin iska kaashaday oo la asaasey Ellicott)® iyo Oceana.) Baaxadda mashruucu wuxuu ahaa in la soo koobo lix kanaal oo dherer ahaan u ah 23km, 50m ballaaran, iyada oo loo marayo aagagga boqoshaada urursan (boqolkiiba xNUMX-30 oogada dusha sare.) Natiijooyinka mashruuca tijaabada ah waxay caddeeyeen awoodda awoodda fidinta fulinta mashruuca. . Intii lagu jiray mashruucan, Elliana waxay ku bixisay waqti badan qorsheynta.
Qaababka cusbada waxay ahaayeen kuwo aad u adag, oo lahaa ilaa 3,000 psi iyo celcelis ahaan 1,500 psi. Elliana waxay ku sii wadatay hagaajinta naqshadaha mustaqbalka. Intii lagu guda jiray 1990, DSW waxay bilowday inay dalabyo ka qaadato shirkadaha dhoobada ka qoda adduunka oo dhan si loo nadiifiyo bedka dhererkiisu yahay 30 km2. Laba shirkadood oo laga leeyahay Israel ayaa la siiyay qandaraasyo saddex sano ah. Oceana waxay shaqo bilawday sanadkii 1991. Waxay ahayd marxaladdan Ellicott® International of Baltimore, Maryland waxay go'aansatay inay ka baxdo shirkad wadaag si looga hortago tartan lala galo macaamiisha mustaqbalka.
Oceana wuxuu iibsaday laba Ellicott® sumadda B890 oo ka timid Shirkadda Marcopper Mining Corporation ee Filibiin. Oceana ayaa dib u dhis iyo wax ka badal ku sameysay ceelasha si ay ugu haboonaato baahida mashruuca. Hagaajinta waxaa ka mid ahaa balaadhinta hoollada si ay awood ugu yeeshaan rogrog ballaaran oo ku yaal isla booska barroosinka.
Ellicott® International waxay bixisay laba giraangirood oo dual oo cusub oo loogu talagalay maraakiibta tobanka jir ah, kuwaas oo markii hore lagu dhisay naqshad curyaamiin hal ah, oo dib loo dhisay bambooyin iyo matoorro
Heerka wax soosaarka Oceana ee leh baaldiga baaldiga ayaa 35 boqolkiiba ka weynaa ceebaha kale ee ka shaqeeya mashruuca. Mashruucu wali wuu socdaa Ellicott® calaamadaha haraaga.